Twin Seoul sigaba isigaba sokuqala kunye 'ingqalelo (intlanganiso) "ngu
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba isigaba sokuqala kunye 'ingqalelo (intlanganiso) "ngu
Twin Seoul enye umphefumlo ngendlela yokwenene
ubomi lwangaphambili ukufumana [3500 yen mahala apreyizali] ukuya oosiyazi yahlulwe amabini, waba waseDell bafunde olo hambo ukuze kuphuculwe ngamnye. Twin Seoul kodwa uye ukuba kusoloko yahlulwe amadoda amabini kunye nabafazi, oku isizathu kuthiwa ingakumbi ukufunda ngalo uthando amadoda nabafazi.
newele Seoul, okanye akazange aphile kwi xesha rhoqo, kuba kakhulu kukho evulekileyo, ezifana okusingqongileyo kunye nobudala, kumkhawulela, kodwa amathuba kuyinto ephantsi, ukuba sidibana kunqabile amthembayo kweli hlabathi Ewe. Lihlangabezana
umphefumlo ngamawele, umphefumlo ngokusebenzisa kusoloko amanqanaba ezisixhenxe lulawulo iphela izama abe mnye. Xa umphefumlo ngamawele uzalisekisiwe, umphefumlo xa entanjeni ngokutsha ibe nye, sifanele ukuba senze utshintsho emva kwexesha elide kunye nenqanaba ukubuyela yokuqala enye karhulumente.
inyathelo lokuqala 'ingqalelo (intlanganiso)' iqonga sele wayedla ngokuthi ukuba abo incasa ngengqiqo yokomoya.
abangamawele Seoul waza wadibana
? umphefumlo ngamandla imibuzo ukuze uxhamle entliziyo xa, xa ndidibana
umphefumlo iwele ukukhumbula uvuyo, yaye wazi kakuhle phambi kwayo, kodwa intlanganiso yokuqala. Xa sadibana, apho kudla yahlaselwa nostalgia, ekungazanga kubekho sibonane kwanangaphambi, imvakalelo ingqiqo kakhulu kunokuba izinto ezifana ngandlel 'ithile. inxenye ke elide kakhulu bahlangana umzimba akubanga wabonakala yovuyo ukuba ndiya kubonakala phezu yonke komhlaba.
? xa wadibana
newele Seoul ukubandakanya jikelele kufuna kwelinye icala, kwelinye icala kuba wathi ngaphezu xa ndadibana nabanye abantu negalelo eyahlukileyo ngokucacileyo isebenza khona. Ayikwazi ukulawula ukuba umphefumlo umdla omnye kakhulu ngokwazo, maxa wambi kubangela Tsuppashi 'efuna iqabane, kwimiphetho abantu kunye nokusingqongileyo xa isenzo yayo Kukho naye ukubandakanya. In
? karhulumente siphaphile ngokomoya
kwinqanaba lokuqala, umphefumlo nganye enye ngokomoya zikarhulumente siphaphile. Soul kunye nabanye kwaye qaphela omnye nomnye, siya ngamnye omnye ukunyusa umgangatho komphefumlo. Ngoko ke, ukuba uhlaselwa ingqiqo akukho ngoko Aragai ngokwabo.
Isigaba sokuqala sale liwele Seoul komdlalo lo mzuzu
amawele Seoul umdla kwinqanaba umphefumlo mzuzu ukutsala omnye kwinqanaba umphefumlo ngaphaya isikhundla nobuntu omnye komnye, isizathu kunye like. Ngalo mzuzu, kodwa kwakhona amaninzi uhlobo lothando xa uqala, hayi nje ngezizathu ukuba ngenxa yokuba ekuthanda look, sensuously beza unyawo entliziyweni yakhe, abe ukuba alawulwa imvakalelo kuyinto.
omnye komnye ngokuqaphela ukhululekile ukuba imvakalelo, uyalikhumbula nostalgia novuyo ukuba asikwazi bachaza yi engqondweni. Bekuya kuba ubungqina bokuba ngamnye abanye bazive nye umphefumlo. Abanye abantu, oko kwakhona kuthiwa ukonwabela iimvakalelo, ezifana nokunyuka ukuya ezulwini. Ukuba wedwa ukususela kwintlanganiso yokuqala kuhlaselwa imvakalelo okungalawulekilyo zasemzini, mhlawumbi loo mntu umphefumlo ezimbini.
Re kukuthi, bekuya kuba ubungqina bokuba ngamnye ezinye va nye umphefumlo. Abanye abantu, oko kwakhona kuthiwa ukonwabela iimvakalelo, ezifana nokunyuka ukuya ezulwini. Ukuba wedwa ukususela kwintlanganiso yokuqala kuhlaselwa imvakalelo okungalawulekilyo zasemzini, mhlawumbi loo mntu umphefumlo ezimbini.